NOLOL IYO JACAYL KU WAARTAY GEED HOOSTII MUDO 25 SANO AH | Toggaherer's Weblog
AGAASIMIHII HORN AFRIK EE MUQDISHO OO LAGU DILAY BAKARAHA MOQDISHO
MADAXWEYNAHA SOMALIA SH.SHIRIIF OO KU DHAWAAQAY IN UU CIIDAMO AMAANKA SUGA SAMAYNAYO
NOLOL IYO JACAYL KU WAARTAY GEED HOOSTII MUDO 25 SANO AH
Posted by: toggaherer on: February 5, 2009
Qisadan oo ah mid dhab ah lagana soo xigtay jariirada Gulf-Times ee ka soo baxda wadamada gacanka carabta ayaa ah mid ka dhacday dalka India, dalkaas oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan dunida marka laga reebo China oo ay jaar yihiin. Hadaba ku soo dhawaada qisadii oo dhan:
Mangra and Balkhi Mahari ayaa ah laba qof oo isku guursaday jacayl ay isu qabeen awgii iyaga oo hareer maray sidii ay la rabeen qoysaska ay ka soo kala jeedeen, oo ahayd in uu midba guursado qofka ay aabihii iyo hooyadii u soo xuleen. Nidaamka isku xulka labada qof ee isguursanaya oo loo yaqaano afka qalaa (arranged marriage) ayaa waxa ku dhaqma dadka hindida ah, taas oo runtii caqabad wayn ku ah dadka iyagu isasoo xusha eek u heshiiya guur.
Hadaba labadan lamaane ee aynu magacooda kor ku xusnay, ayaa is guursaday iyaga oo hareer maray wixii dhaqanka u ahaa ee ay qoysas koodu la rabeen oo ahayd in loosoo xulu mid kasta hadba cidha ay qoyskoodu jecelyahay dhaqankana waafaqsan. Markii ay is guursadeen ayaa qoysaskoodii eryeen labadiiba oo guryahoodii ka soo saareen. Mangra iyo Balkhi Mahara talo ayaa ku cadaatay, waxaanay arin isugu geeyeen in ay hoy waydiistaan nin jooga meel macbad ah oo sanamo lagu caabudo (temple). Ninkii wadaadka ka ahaa macbadka ayaa isaga oo ka baqay in ay qabsadaan qoysaskooda iyo dadka magaaladuba, u diiday in uu siiyo meel ay seexdaan lamaanahanu. Iyagoo wax ay sameeyaan garan la lamaanihi ayaa habeenkii waxa ay hoos seexdeen geed wayn oo looga yaqaano tuuladaa ay degenaayeen Dudhiya Pakhar taas oo ah geed ka mid ah dhirta loo yaqaan Banyan ka.
Geedkii ayaa waxa ay talo ku gaadheen in ay ka dhigtaan gurigooda ama hoygooda dhabta ah waayo waxa ay ahaayeen danyar aan haba yaraatee waxba faraha ku hayn. Waxa ay ku xidh xidheen geedkii bac wayn si ay uga hadhsadaan qoraxda kulul roobkana uga celiso xili roobaadka. Waxa u dhex yaala alaab guri ahaan, weel yar, busteyaal, dhawr shandadood iyo dhardhaaro ay wax ku karsadaan.
Labadan lamaane, waxa ay ku dhaleen geedkaas hoostiisa laba wiil oo lakala yidhaahdo, Soriha iyo Ajay Mahali. Labada wiil ka wayn oo dhawaan guursaday isagu waxa uu dhistay guri uu iska leeyahay. Wiilku waalidkii ayuu ka codsaday in ay gurigiisa cusub la dagaan, balse waalidkii oo ku iibiyo geed cadayga laga guro dhirta Bamboo ga loo yaqaan Tatisilve train station ayaa ku gacan saydhay dalabkaa kaga yimi xaga wiil kooda ee ah in ay gurigan cusub la dagaan. Magra oo ah aabaha qoyska ayaa yidhi geedkan kama guurayno, sababtoo ah waxa uu hoy noo ahaa mudo dhan 25 sano, wuu na caawiyay geedku iyada oo caawimo cidkasta oo kale noo diiday. Xasuusahayagii samaa iyo kuwii xumaaba isaga ayay ku dhanyihiin. Labadooda wiil oo ah muruqmaalo ayaa aad ugu faraxsan nolosha waalidkood soo mareen lana soo mareen iyaga. Labada wiil ka yar ayaa yidhi, waalidkay waxay u soo dhabar adaygeen nolol adag, may ka yaacin meeshii ay ku dhasheen ee way u adkaysteen, waxaanay waalidkay tusaale fiican u yihiin dhamaan dadka is jecel in aanu xataa kala kaxayn Karin jacalykooda wakhtiga adagi.
Ninkii wadaadka ka ahaa macbadka ayaa isna waxa uu yidhi mar wax laga waydiiyay arinkan, waxaanu ku salaamaynaa qoyskan jacayl bulsho ahaan. Waxay naftooda iyo ta caruurtoodaba ku samato bixiyeen muruqooda, waligood cidna kaalmo kamay dalban iyaga ayuunbaa isku tiirsanaa.
Mangra, oo ahaa aabaha qoyska ayaa isna ku soo khatimay hadalkiisa; Noloshu way nagu adkayd markaanu isguursanay ka dib, laakiin waxaan isku taageernay niyad samaan, waxaanay taasu noo horseeday in aanu ku noolaano nolol aan kibir iyo isla wayni midna lahayn, waanaanu ku qanacsanahay guurkayagii mudo 25 sano laga joogo.